Shina tavoahangy tavoahangy jina PET milina famokarana sy mpamatsy | Higee
Ny tsipika milina famenoana tavoahangy PET dia mampiditra ny famafana tavoahangy, ny famenoana ary ny fametahana milina amin'ny milina monoblock iray. Ny fizotrany dia tanterahina ho azy tanteraka. Ny famenoana tavoahangy PET na tavoahangy vera na afaka tavoahangy rehetra dia azo alamina.
Mifaninana amin'ny rano tavoahangy tavoahangy PET: 4 amin'ny 1 Monoblock Production Line
Azontsika atao koa ny mampita ny tsipika famokarana zava-pisotro miaraka amin'ny fitaovana fitsaboana rano, ny rafitra fampifangaroana alohan'ny fitsaboana, ary ny rafitra famonosana ao anatin'izany ny milina fanoratana vita amin'ny tanany, ny milina fametahana sns sns.
1. mpampita rivotra
2. Rafitra famenoana sy famonosana ny asa
RXGF andiana ranom-boankazo famenoana ranom-boankazo mampifangaro ny fanasana tavoahangy, famenoana rano ary fametahana anaty monoblock iray, ary ireo dingana telo dia tanterahina tanteraka. Izy io dia ampiasaina amin'ny famenoana ny ranom-boankazo sy zava-pisotro dite. Izy io dia miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso mari-pana tonga lafatra, rafitra miverina miverina, rafitra fanadiovana mandeha ho azy ary programa fanaraha-maso. Ny singa milina tsirairay izay mifandray amin'ny ranon-javatra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony sy fingotra amin'ny sakafo.
● Ny lohan'ny rinser rehetra vita amin'ny vy, ny famolavolana fomba fanondrahana rano, mitsitsy ny fanjifana rano & madio kokoa.
● Gripper vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny plastika, hiantohana ny fianjerana tavoahangy kely mandritra ny fanasana
● paompy manasa vy
● Fanamafisana ny famenoana avo lenta, fanaraha-maso signal PLC miovaova, hamarino tsara ny famenoana
● Famenoana hery misintona, & famenoana milamina sy tsy tapaka
● Ny faritra mifandray amin'ny vy tsy misy fangarony sy ny tanky misy ranoka, ny poloney tsara, mora diovina
● Tsy misy tavoahangy tsy feno
● Rafitra fametrahana & famonoana, loha fanakanana elektromagnetika, miaraka amina fivoahan'ny enta-mavesatra, alao antoka fa fianjerana tavoahangy farafaharatsiny mandritra ny fametahana
● Ny fananganana vy tsy misy fangarony 304 rehetra
● Tsy misy tavoahangy tsy misy kapoka ary mijanona mandeha ho azy rehefa tsy misy tavoahangy
Fahafahana / 500ml
3. Boribory miakatra Sterilizer
Teo aloha: Masinina famenoana zava-pisotro angovo
Manaraka: Masinina mameno labiera tavoahangy fitaratra